I-Cogta iwele ngelibanzi ngokusebenza kwezimali zika-2020/2021 – Sivubela intuthuko Newspaper
UMNU Sipho Hlomuka ophathiswe uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal
ZIHAMBELA phezulu izisebenzi zoMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal kulandela umbiko omuhle womcwaningi mabhuku oveze ukuthi lo mnyango kawunagcobho ngokusebenzisa budlaba imali yabakhokhi ntela yango-2020/2021 ebiyabelwe lo mnyango ukuthuthukisa umphakathi owakhele lesi sifundazwe.
Kuqhulika izihlathi kuMnu Sihle Hlomuka ophathiswe lo mnyango ngaphansi kobuholi bukaMnu Sihle Zikalala ongundunakulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal njengoba ehambela phezulu kulezi nsuku ngokusebenza kahle kwezimali zangonyaka wezimali ebiyabelwe umnyango wakhe.
Isitatimende esikhishelwe abezindaba wuMnu Senzelwe Mzila okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal siveze ukuthi uMnu Hlomuka uhlabeke umxhwele ngokuhle okwenziwe yizisebenzi zomnyango wakhe ekuqinisekiseni ukuthi imali ebiyabelwe lo mnyango wenze kahle waqinisekisa ukuthi imali yabantu yenza izidingo zabo. Lo mbiko sekungukwesibili uphuma ulandelana ngokusebenza kahle kwemali esuke yabelwe lo mnyango.
UMnu Hlomuka uthe ukholwa ukuthi lo mbiko omuhle bawuthole ngenxa yokuzinikela kweNhloko yomnyango uMnu Thando Tubane nethimba abambisene nalo ebeliqinisekisa ukuthi kalikho isenti eliwela phansi kodwa lenza okuzothuthukisa umphakathi waKwaZulu-Natal. “Njengomnyango oyiso elibanzi ekubhekeni ukusebenza kwendlu yobuholi bomdabu nokusebenza komasipala sikholelwa ukuthi kumele sihole ngokuba yisibonelo okuyikhona okusenze ukuthi sithole umbiko ongenagcobho ekusebenzeni kwezimali zango-2020/2021. Siqikelelile ukuthi imali yabantu iwenze kahle umsebenzi wayo,” kusho uMnu Hlomuka.
Nenhloko yalo mnyango uMnu Tubane isike elijikayo ngokwenza kahle okuholele ekutheni bathole umbiko omuhle wezezimali. UMnu Tubane ubonge uMnu Hlomuka ngobuholi bakhe obuqinisekisa ukuthi umphakathi waKwaZulu-Natal uyazuza kwezentuthuko.
OWAKAMASHU NESIFISO SOKUYOGIJIMA ENGILANDI